Mandranitra Fifanenjanana ara-poko sy fivavahana ny volavolam-pisarahana ao amin’ny Fiangonana Ethiopiana Orthodoksa · Global Voices teny Malagasy
Mivory hananganana rafi-pitantanam-paritra ho azy manokana ny Oromo mpitondra fivavahana
Voadika ny 15 Septambra 2019 5:42 GMT
Pretra iray avy ao amin'ny Fiangonana Ethiopiana Orthodoksa Tewahedo maka aina ao amin'ny Fiangonana nolavahana tamin'ny vatolampy ao amin'ny Fiangonan'i Bet Giorgis, Lalibela, Ethiopia, 1 Novambra 2007. Saripikan'i A. Davey via Flickr, CC BY 2.0.
Tamin'ny 1 septambra 2019 lasa teo, nisy ny komity vonjimaika natsangan'ny mpitondra fivavahana Oromo avy ao amin'ny Eglizy Ethiopiana Orthodoksa Tewahedo (EOTC), nanambara ny fikasan'izy ireo hanangana fitantanam-paritra paroasialy vaovao ao amin'ny Fanjakam-Paritra Oromia. Te-hanangana “fahefana episkopaly” — amin'ny fomba fitenim-piangonana— ao amin'ny faritra izy ireo izay mamaly ny filàna ara-panahy, ara-pitantanan-draharaha ary amin'ny fitenim-bahoaka Orthodoksa Oromo.
Manana mpikambana mihoatra ny 50 tapitrisa avy ao Ethiopia iray manontolo ny EOTC amin'izao fotoana izao.
Nilaza ny Oromo mpikambana ao amin'ny fiangonana fa ny tsy fahombiazana sy ny kolikoly no manakana ny EOTC tsy hamaly ny filàn'izy ireo ara-panahy, ara-piteny ary ara-pitantanana ary mandrahona ireo mpikambana ao amin'ny komity vonjimaika fa handray ny fepetra eo ampelatanany — ao anatin'izany ny fametrahana antokon-draharaha miavaka sy misaraka — raha tsy mandre setriny ao anatin'ny 30 andro avy amin'ny andrim-pitantanan'ny EOTC, fantatra amin'ny anarana hoe Synaoda Masina sy raim-piangonana.
Manana ny rafi-pitantananany manokana izay tsy mifanandrify amin'ny firafitry ny governemanta federaly ao Ethiopia, rafetin'ny faritra ara-poko sivy samy mizaka tena — ka i Oromia no lehibe indrindra — ny EOTC. Te-handamina indray ny firafitry ny fiangonana hifanaraka amin'ny rafitra politika federaly federaly ny Oromo mpitondra fivavahana.
Manana fiangonana manodidina ny 35000 ny EOTC manerana an'i Ethiopia. Misy ny tatitra milaza fa 7000 ny isan'ny fiangonana ao Oromia. Manodidina ny 20 isanjaton'ny fiangonana rehetra izany.
Raha manangana rafi-pitantanam-paritra paroasialy tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny Synaoda Masina ny Oromos, dia mety hiteraka fifandirana ara-pitantanana izany.
Mino ny mpitondra fivavahana fa hanampy amin'ny famelomana indray ireo fiangonana foana tsy misy olona sy lasa tsy noraharahiana izay nilaozan'ny mpanara-dia azy ireo ka nanitatra ny fiangonana protestanta ao Oromia ny fandrafetana indray ny rafit-pitantanan'ny fiangonana.
Raha ny filazan'ny filohan'ny komity vonjimaika, lehiben'ny mampianatra ambony, Belay Mekonen, dia efa nisy ny toe-javatra teo aloha ka nahatonga ny fanaovana izao. Nilaza izy fa efa nanova ny rafit-pitantanana ny fiangonana tao amin'ny tantara mba hifanaraka amin'ny fiovan'ny rafitry ny governemanta izany.
Nanizingizina ihany koa izy fa hanampy ny EOTC ny vondrom-pitantanana vaovao hanatanteraka ny iraka napetraky ny apôstôly taminy amin'ny alàlan'ny fanakaikezan'ny fiangonana ny vahoakan'i Oromia, miaraka amin'ny kinasa hanamafisana sy hametrahana ho ofisialy ny fampiasana ny Afan Oromo (ny fiteny Oromo) ao amin'ny EOTC.
Tsy toa ny fiangonana protestanta izay manatontosa ny fotoana amin'ny fiteny Afan Oromo, milaza ny Oromo mpitondra fivavahana fa antenain'ny EOTC ny Oromo mpandeha any am-piangonana hivavaka amin'ny fiteny Ge’ez, fiteny litorjikan'ny fiangonana, na Amharika, fitenim-piasana ao amin'ny governemanta federalin'i Ethiopia. Saingy fiteny taloha izay tsy azon'ny ankamaroan'ny olona ny Ge'ez — tsy any Oromia ihany fa manerana an'i Ethiopia. Ary ny Amharika dia fiteny ampiasain'ny olona monina ao amin'ny tanàna salatsalany sy lehibe any Oromia, fa tsy misy mampiasa loatra any amin'ireo faritra ambanivohitra izay manjaka kosa ny Afan Oromo.
Nilaza ny mpikambana iray hafa ao amin'ny komity vonjimaika fa hanampy ny olona mahatsapa ho voahosihosy mba hiverina any ampiangonana ny vondrom-pitantanana vaovao .
Moanina mamaky amin'ny teny Ge'ez, fiteny litorjika ao amin'ny Fiangonana Orthodoksa Tewahedo ao Ethiopia, 15 Oktobra 2018. Saripikan'i Rod Waddington via Flickr, CC BY 2.0.
Faminganana, fitsipahana masina
Miteraka tosika fitsipahana avy amin'ny Synaoda Masina ny tsindrin'ny komity, mametraka fifandirana ara-pitantanana avy ao anatiny.
Misy fanoherana ny komity ihany koa avy amin'ny mpino Orthodoksa mazoto, izay mahatsapa fa tena manohintohina ny fanerena hanangana vondrom-pitantanan-draharaha misaraka. Lazain'izy ireo fa andry masina noho ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany ny fiangonany.
Ny hafa indray nanisy marika ilay hetsika ho fanararaotana na fikasana hamotika ny singa mamaritra ny mari-panondroana nasionaly, kolontsaina ary fivavahana azy:
Izany no mahatonga ahy mihevitra fa tsy mpandala ny andry EOC izay mitady fampiatiana bebe kokoa ireo mpioko vaovao ireo. Mpandroba ara-kolontsaina izay nanana hirika tombontsoa ara-toekarena sy ara-politika avy amin'ny korontana sy krizy ao amin'ny andrin'olombelona lehibe indrindra fotsiny ry zareo
Tsy nihevitra intsony aho hoe haka mari-panondroana amin'ny fombam-pivavahana iray manokana saingy mandrimandry maso amin'ny EOTC aho [izay nahazatra ahy ny manadrohadro azy tamin'ny androm-pianarako tany amin'ny kolejy].
Nana-tantara izany ary notorontoronina sy narovan'ny razanay. Mirehareha amin'ny EOTC aho sy ny fahendreny.
Fikambanana maro ao amin'ny EOTC sy mpitantana paroasialy maro ao Addis Ababa no nanomana famoriam-bahoaka hotontosaina amin'ny alahady 15 septambra 2019, ho fanoherana ny firongatry ny herisetra amin'ny mpitondra fivavahana Ortodoksa, amin'ny laika ary fanoherana ny famotehana fiangonana.
Nilaza ny mpikarakara ny famoriam-bahoaka fa novolavolaina ny fihetsiketsehana hitaky amin'ny governemanta hanome fiarovana ny Kristiana Orthodoksa manerana an'i Ethiopia. Nasongadin'izy ireo fa tsy misy ifandraisany amin'ny mpitondra fivavahana Oromo ny famoriam-bahoaka ary azo foanana raha mahazo valiny azo ampiharina.
Saingy nahazo lanjany fanampiny ny famoriam-bahoaka nokasaina satria milaza ny mpikarakara fa manohana ny valin'ny nomen'ny Synaoda Masina ho an'ny Oromo mpitondra fivavahana ry zareo.
Nahazo fanohanana avy amin'ny olona tsy nampoizina ihany koa ny mpitondra fivavahana: Daniel Kibret, olo-malaza ao amin'ny EOTC, mpanoratra sady mpiara-dia matanjaka ao Ethiopia amin'ny praiminisitra reformista Abiy Ahmed.
Tao amin'ny lahatsoratra bilaogy lava be, nanoratra izy fa na dia manaiky ny famakafakan'ny mpitondra fivavahana amin'ny olana ao amin'ny EOTC aza izy dia nanoratra ihany koa fa diso ny vahaolana nataon'ny mpitondra fivavahana.
Saingy manizingizina ny mpikambana ao amin'ny komity vonjimaika fa tsy te-hampisintana ny EOTC any Oromia ry zareo. Tsy namolavola singa teolojika miavaka izy ireo ary tsy nampiditra kanôna sy fombam-pivavahana vaovao, hoy ry zareo.
Fihenjanana ara-pivavahana, fifaninanana ara-poko
Lasa fanehoana lehibe amin'ny fifandroritana ara-pivavahana entin'ny fifangarihana ara-poko eo amin'ireo sangany ara-politika ao amin'ireo vondrom-poko maro ao Ethiopia ihany koa ny fifamaliana..
Ao amin'ny media sosialy, vao maika nampitombo ny fifanenjanana ara-poko, noho ny fifanenjanana naharitra teo amin'ny vahoaka Amhara sy Oromo, roa amin'ireo vondrom-poko lehibe indrindra ao Ethiopia ny fihetsik'ireo mpitondra fivavahana: Nihabetsaka ny adin-tany, tantara, toekarena ary kolontsaina, efa ho herintaona taorian'ny firaisankina befikafika tao anatin'ny Antoko Revolisioneran'ny Vahoaka Ethiopiana (EPRDF) mba handravana ny fanjakazakan'ny Sangany Tigryana izay nitondra nandritra ny 27 taona.
Samy manana karazam-pivavahana maro arahana ny Amharas sy ny Oromos. Ny kristianisma sy ny finoana silamo no tena be mpanaraka.
Raha araka ny antontanisa, 30,4% amin'ny Oromos 25 tapitrisa no manaraka ny EOTC, raha 82,5% amin'ny Amharasa 19 tapitrisa kosa no mpino Ortodoksa.
Manana fifandraisana mivaingana amin'ny EOTC ny Amharas. Mamaritra ny Amharas eo anilan'ny Tigrayana ho mpandova sy sarintavan'ny Kristianisma Orthodoksa ny mpahay tantara malaza Harold Marcus .
Mifanohitra tanteraka amin'ny fifandraisan'ny Oromos amin'ny EOTC izany. Na dia misy Oromo Orthodoksa marobe aza, dia misy sasantsasany mandresy lahatra fa misy Oromos nasionalista mirona mampiroborobo ny nasionalisma Oromo laika ho ideolojia mampiray.
Raha ny marina, ny finoana niorina efa hatry ny ela ao amin'ny nasionalista Oromo dia manamafy fa rehefa nampidirina tao Ethiopia maoderina ny Oromos sy ny vahoaka hafa tany atsimo ao Ethiopia, dia niasa mavitrika amin'ny fandraisana ny politikam-panjakan'ny amperora ethiopiana mifandimby ny EOTC .
Mihevitra izy ireo fa ny ankamaroan'ny eveka sy pretra notendrena ara-tantara ho any Oromia dia mpiteny Amharika teratany izay mikendry ny haha-“Amhara” ny Oromos amin'ny fanakiviana ny fampiasana ny fiteny Afan Oromo ao am-piangonana.
Fiverenan'ny fifanolanana maharitra ao anatin'ny rafi-pitantanan'ny EOTC indray izao fifamaliana misy eo amin'ny Oromo mpitondra fivavahana Oromo sy ny Synaoda-Masina izao — na dia amin'ny endrika sy mpilalao hafa aza no isehoany amin'izao fotoana izao.
Tamin'ny taona 1991, taorian'ny fifehezan'ny Mandam-panafahan'ny vahoaka Tigray (TPLF) ny firenena, dia vaky ny fifanolanana anatiny tao amin'ny rafi-pitantanan'ny EOTC, rehefa nanao izay hevitra hanesorana ny Patriarka fahefatra, Abune Merkorios ny fitondrana tarihin'ny TPLF.
Taorian'ny fanesorana ny Patriarka, nanangana Synaoda-Masina an-tsesitany ny hetsika iray tohanan'ny mpikambana diaspora ethiopiana any Etazonia tamin'ny taona 1996.
Niteraka fisaratsarahana teo amin'ny mpitondra fivavahana sy ny mpanaraka izay nateraky ny fifanenjanana ara-poko sy ara-politika teo amin'i Amhara sy ny Tigray izany.
Tamin'ny jolay 2018, nanatrika ny fampitambarana indray ny Synaodan'ny EOTC sy ny Synaodan'ny EOTC an-tsesitany ny praiminisitra Abiy.
Raha tsy jerena ny fiavian'ny foko sy ny fifandirana ara-pitantanana mitranga amin'izao fotoana izao, mihevitra ny ankamaroan'ny mpivavaka Orthodoksa fa singa mamaritra ny maha-firenena ethiopianina ny fiangonana. Na ny olona mamaritra ny fifandraisany amin'ny fiangonana ho kolontsaina kokoa fa tsy araka ny finoana aza dia mahatsapa fifandraisana.
Saingy manantitrantitra ny Ethiopiana mipetraka any amin'ny faritra fehezin'ny finoana tsy Orthodoksa fa tsy miorina ao amin'ny fombam-pivavahana Orthodoksa ny mari-panondroan-dry zareo.